မြန်မာ့ဘောလုံး သွေးသစ်လောင်းပြီး ပြန် လာပြီ | ဧရာဝတီ
မြန်မာ့ဘောလုံး သွေးသစ်လောင်းပြီး ပြန် လာပြီ
ဆောင်းဦးလင်း| July 20, 2012 | Hits:12,280
13 | | ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲမှာ ဗီယက်နမ် ကို ၄-၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရလို့ ကြေးတံဆိပ်ဆု ရခဲ့တဲ့ အသက်၂၃ နှစ်အောက် မြန်မာ ဘော လုံး အသင်း (ဓာတ်ပုံ – Getty Images)
သယံဇာတ အများအပြား ထွက်တယ်လို့ လူသိများတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာမထင်ပေါ်နိုင်ပဲ ငုပ်လျှိုးနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ “မြန်မာ့ အားကစား ကမ္ဘာကိုလွှမ်းရမည်”လို့ ဆောင်ပုဒ်ရှိပေမယ့် ယခုအချိန်ထိ အာရှအဆင့်ပွဲတွေ ရောက်ဖို့တောင် အရှိန် ယူနေဆဲပါ။
တချိန်က အာရှမှာ ရွှေခေတ်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာ့ဘောလုံးဟာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ မကြာ ခင်ကမှ လူငယ် ဘောလုံးသမားတွေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ စီမံကိန်းကို စ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ဘောလုံး တခေတ်ဆန်းဖို့ အားထုတ်နေတာ အခုဆိုရင် အနာဂတ်အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ရောက်လာပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အသက်၂၃ နှစ်အောက် ဘောလုံးအသင်းဟာ ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲမှာ ဗီယက်နမ် ကို ၄-၁ နဲ့ အနိုင်ရလို့ ကြေးတံဆိပ်ဆု ရခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများကို မြန်မာပြန်လာပြီဆိုကာ အချက်ပေးလိုက် နိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ မှာတော့ အသက် ၂၂ အောက်အသင်း ဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ အာရှ အသက် ၂၂ အောက် ခြေစစ်ပွဲမှာ အာရှ အင်အားကြီး တောင်ကိုရီးယားကို သရေ ကစားနိုင်ခဲ့သလို ဒေသတွင်းပြိုင်ဖက် ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အုပ်စု ဒုတိယနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲက ပထမဦးဆုံး ခြေစစ်ပွဲအောင်တဲ့ အသင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေမှာ တောင်ကိုရီးယားကို ဂိုးမရှိ သရေ၊ တခြားပြိုင်ဖက်အသင်းတွေ အားလုံးကို ဂိုးအသာသွင်းပြီး ခြေစစ်ပွဲအောင် ခဲ့ တာကြောင့် အာဆီယံ ဘောလုံးပရိသတ်များကြား ပြောစမှတ် တွင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့ ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်အောင် က“လူငယ်အသင်းတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကျနော်တို့ ဘောလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အနာဂတ် စီမံကိန်းတွေအတွက် ယုံကြည်မှု တိုးစေပါတယ်။ အခု အသက် ၂၂ အောက် အာရှခြေစစ်ပွဲစဉ်မှာ ထိုက် တန်တဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တာက လာမယ့် ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းမှာ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပဖို့ နီးလာချိန်လည်း ဖြစ်တာမို့ စိတ် ဓာတ် ခွန်အားကို မြင့်မားစေပါတယ်”လို့ ဖီဖာ ကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာဘောလုံး အသင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ လောက်တုန်းက အာရှမှာ တန်ခိုးထွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ် အာရှဖလား မှာ ဒုတိယ ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ နဲ့ ၁၉၇၀ ခုနစ် အာရှမှာ ၂ ကြိမ် ဆက်တိုက် ချန်ပီယံ သရဖူ ရခဲ့တယ်။ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း ၁၉၆၅၊ ၁၉၆၇၊ ၁၉၆၉၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၇၃ နှစ်တွေမှာ ၅ ကြိမ် ဆက်တိုက် ဘောလုံးချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အာရှရဲ့ ဘောလုံးထူးချွန်သူ ကစား သမားတွေ ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး နောက်ကျန်နေမှုနဲ့အတူ မြန်မာ့ အားကစားလည်း မှေးမှိန်ခဲ့ရပြီး အာရှမှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ ဘောလုံးအသင်း ခြေကျခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
၂၀၁၁ ခုနစ်က ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲမှာ တတိယ ဆုရခဲ့တာကလွဲရင် မြန်မာဘောလုံး တိုးတက်မှု လမ်းစ ပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၈ ခုနစ်မှာ အာရှဖလား ဖိုင်နယ်ကို ကန်နိုင်ခဲ့ရာကစလို့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့ရပြီး ပထမဆုံး ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ ကို လည်း ၂၀၁၀ တောင်အာဖရိက ခြေစစ်ပွဲကျမှ စတင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အင်အားကြီး တရုတ် ဘောလုံးအသင်းကို ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပါတယ်။
အတိတ်မြက်ခင်းစိမ်းမှာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်ရဖို့ မြန်မာဘောလုံးတာဝန်ရှိသူတွေဟာ အခြေခံကအရှိအတိုင်း ပြန် စရမှာကို သိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ ဦးတင်အောင် က“ကျနော်တို့ဟာ ဘောလုံးလောက ပြန် တိုး တက်လာဖို့ လူငယ်ဖွံဖြိုးရေးတွေကို အာရိုက်စိုက်ပြီး လုပ်ခဲ့တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ဆက်ပြီး“စီမံကိန်း အသစ်အရဆိုရင် တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကို စတင်ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ အစီအစဉ်တွေ မျှော်မှန်းထားသလို အဆင်ပြေ ချောမွေ့ မယ် ဆို ကျနော်တို့ ရဲ့ အနာဂတ် အသက် ၁၇ အောက် လူငယ်အသင်းဟာ ၂၀၂၁ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ၀င်ကန်နိုင်မှာပါ”လို့ လည်း ဦးတင်အောင် က ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်း မြန်မာ့ဘောလုံးလောက တိုးတက်လာတာဟာ ဖီဖာ ရဲ့အကူအညီတွေကြောင့်လို့ ဦးတင်အောင်က ဆိုပါသေးတယ်။
“ဖီဖာ ဂိုးလ် စီမံကိန်းအကူအညီ နဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ရုံးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလို ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်း အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးတွေ တိုးတက်လာခဲ့တယ်။ မန္တလေးမှာ ဘောလုံးသင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သလို တတိယ ဂိုးလ် စီမံကိန်း က လည်း လူငယ်အသင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရလာဖို့ လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လိဂ် ကိုလည်း ဖီဖာရဲ့ စည်းမျဉ်း စည်း ကမ်း တွေအတိုင်း ၂၀၀၉ ခုနစ်မှာ စတင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်”လို့ ဦးတင်အောင်က ဖီဖာ ဒေါ့ကွန်းကို ပြောပါတယ်။
မကြာမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ လူငယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှုက မြန်မာဘောလုံး လောက ပြန်လည်တိုးတက်မှုရဲ့ သက်သေပါပဲ။ လူငယ်တွေရဲ့အင်အားနဲ့ အသက် ၂၂ အောက်ပြိုင်ပွဲမှာ တောင်ကိုရီးယားကို သရေ ကစားနိုင်ခဲ့သလို အုပ်စု ပွဲစဉ် ၄ ပွဲကိုလည်း ဂိုးပြတ် တွေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
ခြေစွမ်းပြနိုင်သူတွေကဆို ကွင်းလယ်ကစားသမား အသင်းခေါင်းဆောင် ကျော်ဇေယျာဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ကို ၆ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အပြတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပွဲတုန်းကလည်း ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်တန်းခံစစ်က ဇော်မင်းထွန်းလည်း တဖက်တိုက်စစ်မှူးတွေကို အကောင်း ဆုံး ဟန့်တားနိုင်ခဲ့သလို ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူးတွေဖြစ်တဲ့ ကျော်ကိုကို နဲ့ ကောင်းစည်သူတို့ ကလည်း ပြိုင်ဘက် နောက် တန်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သူတွေပါ။
မြန်မာတွေသာမက အာဆီယံ ပရိသတ်များကိုပါ အံ့အားသင့်သွားရအောင် အကောင်းဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ အသက် ၂၂ အောက် မြန်မာ လူငယ်အသင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သူက တောင်ကိုရီးယားနည်းပြ ပတ်ဆောင်ဟွာပါ။ သူ့ကြောင့်လည်း မြန်မာအသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင် ရည် မြင့်မားလာနေပြီး ရှေ့ဆက်အောင်မြင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပိုကြီး လာနေပါတယ်။
ဦးတင်အောင်က“ပတ်ဆောင်ဟွာကို ကျနော်တို့ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ကျနော်တို့ ယူ ၂၂ အသင်း အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်း တွေ ပြနိုင်ခဲ့တာ သူ့ကျေးဇူးမကင်းဘူး။ နောက်တဆင့် အနေနဲ့ ၂၀၁၃ မှာကျင်းပမယ့် အာရှဖလား ၁၉ နှစ်အောက်ပြိုင်ပွဲကို ခြေ စစ်ပွဲအောင်ဖို့ ကြိုးစား သွားပါမယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ခြေစစ်ပွဲအောင်ရုံတင်မက ၂၀၁၄ အာရှ ၁၉ နှစ်အောက်ပြိုင်ပွဲမှာ ထိပ်ဆုံး လေးသင်းထဲ ပါနိုင်ဖို့ပါ။ ဒါမှ အသက် ၂၀ အောက် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကျနော်တို့ရောက်မယ်”ဆိုပြီး ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုးကား။ ။ www.fifa.com မှ Youth success sends Myanmar soaring
ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ဂိုးလိုင်း နည်းပညာ စသုံးတော့မယ်
ဒုတိယပိုင်း ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရသွားတဲ့ မြန်မာအသင်း
အပြောင်းအရွှေ့ အဖွင့်မှာ စတားရစ်ကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ လစ်ဗာပူး
ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်ရောက် အသင်းများအား သုံးသပ်ချက်
10 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website DR> THET LWIN July 20, 2012 - 4:17 pm	I like myanmar team.I watched the matches. I played foot ball in university.So hopping for better future,proud of our team.
Reply	ကိုအောင် July 20, 2012 - 8:23 pm	၂၀၂၁ ကမ္ဘာဖလား မြန်မာ ၀င် ပြိုင် တာ မြင် ချင်လှပါဘီ။
Reply	K July 21, 2012 - 6:40 pm	တခြားနေရာတွေမှာလိုပဲ ဧရာဝတီကလည်း မြန်မာဘောလုံးအသင်းအကြောင်းကို ရေးတဲ့အခါ အမျိုးသားအသင်းအကြောင်းပဲ ကွက်ရေးတယ်။ သဘောမကျဘူး။ Very Sexist!
Reply	soesoe324 July 27, 2012 - 11:46 am	မြန်မာ့ကျွန်..ကမ္ဘာကို လွှမ်းရမည်……..
Reply	ကိုကို July 28, 2012 - 11:56 pm	လူငယ်တွေ ပြည်ပ ထွက် အလုပ် လုပ်နေရ သရွေ့ မည်သည့် အားကစား မျှ
Reply	soe thu ko August 4, 2012 - 5:30 pm	ကိုကိုေ၇ မင်းက ဗမာစစ်စစ်ကို……..အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ မပြီး ခင် ဗမာမမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလေ။ ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ နူတ်အားဖြင့် ပံ့ပိုးမယ်မစဉ်းစားဘူး….. အပျက်သဘောနဲ့ ကန့်လန့်တိုက်တာ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေပေါ့ဗျာ
Reply	ဗမာ့သွေး August 10, 2012 - 1:09 pm	I Agree.ဟုတ်တာပေါ့ ကိုစောသူ။ကျွန်တော့တို.လို မြန်မာတွေကမှာ အားမပေးရင်ဘယ်သူတွေ အားပေးကြမှာတုန်း။ဘာဘယ်ဖြစ်ဖြစ် အားပေးရမှာဘဲ မြန်မာအားကစား ကမ္ဘာကိုလွှမ်းပါစေ။
Reply	ဖိုးထွဋ်ကြီး August 9, 2012 - 12:58 pm	မြန်မာတွေရဲ့ရွှေခေတ်ပြန်ရောက်ခါနီးပြီလို့တကယ်ယုံကြည်တယ်
Reply	ဦးမြင့် August 28, 2012 - 12:11 am	အောင်မြင်မှုက လက်တစ်ကမ်းမှာပါ။ ကြိုးစားထားပါ။ U-22 အာရှဖလားမှာ အဆင့်တစ်ခု
Reply	naung naung September 19, 2012 - 1:03 pm	U-22 အာရှဖလားမှာ ရွှေမြန်မာဖြစ်စေ။